कुखुराका रैथाने प्रजातिको बजारमा सधैं माग उच्च , पाल्ने तरिका अझै निर्वाहमुखी ।
लगानी र श्रम खन्याएर दुनियाँलाई छिटो फाइदा हात पार्न उत्साहित पार्नुपर्ने जमाना छ । व्यवसायिक कृषिका जुनसुकै उद्यम गर्न खोज्नुस्, सुझाव पाइन्छ- विकासे जातका बल गर्नुस् । अन्नबाली, तरकारी र माछा होस् वा पशुपंछीपालन । जे गर्नुस् सिफारिसकर्ता छिटो फाइदा दिने विकासे जात नै सुझाउँछन् ।
पोखरामा डाँडानाक नजिकै भित्री बाटोका राजेन्द्र अधिकारीको सल्लाह भने अलि फरक छ । उनी भन्छन् 'विकासे होइन लोकल पाल्नुपर्छ । तरिका पुर्‍याए लोकलबाट पनि मनग्गे फाइदा लिन सकिन्छ ।' उनको कुखुरा फार्म गएर हेर्नेले विकासे कुखुरापालनको सोच बनाएको छ भने पनि थालिहाल्नुअघि अवश्य सोच्छ । 'बोइलर जतासुकै पाइन्छ तर, लोकलको स्वाद जिब्रोमा बसेकाहरूले सकेसम्म गाउँघरमा पालेकै कुखुरा खोज्छन्,' उनी भन्छन्, 'लोकल धेरैले व्यवसायिक तरिकाले पाल्दैनन् । पाले घाटा लाग्ने कुरै छैन ।' अध्ययनका हिसाबले अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी हुन् । तर, उनले आफूले पढेको विषयको पेशा रोजेनन् । लामो समयदेखि विकासे कार्यकर्ताका रूपमा गैरसरकारी संस्थामार्फ खानेपानी र सिंचाइका परियोजनाहरूमा काम गरिरहेका उनले देशका विभिन्न जिल्ला पुगेर भूगोलपिच्छे कुखुराका फरक फरक रैथाने प्रजाति देखेका छन् । 'मेरो अध्ययनको विषय कुखुरा होइन तर, यो बारे बुझ्न रहर लागेदेखि तरिका पुर्‍याए फाइदा हुने नै देखेको छु,' उनी भन्छन्, 'हामीले अहिले गाउँघरमा पाल्ने गिरिराजजस्ता केही जात इण्डियाले विकसित गरेपछि भित्रिएको छ । खोज्दै गए हाम्रा आफ्नै रैथाने प्रजाति पनि कमका छैनन् ।'
थोरै पाल्ने, आफ्ना लागि खान मात्रै पाल्ने निर्वाहमुखी चलन छाडेर कुखुराका रैथाने प्रजाति पनि संतुलित आहारा र लाग्न सक्ने रोगव्याधिलाई ध्यान पुर्‍याएर पाल्नसक्दा राम्रो फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ छ । 'लोकल कुखुरा पाल्नेको न संगठन छ, न त जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रभावकारी सरकारी कार्यक्रम,' उनले भने, 'बोइलर र लेयर्स पाल्नेको लगानी ठूलो, दाना कारखानाको लविङ । जमात ठूलो भएकाले विकासे जातका कुरा जसले पनि गर्न सजिलो छ । तर, म लोकल पालेर पनि फाइदा लिनसक्ने कुरा भन्छु ।'
त्यसो त अधिकारीले पनि विकासे जातका कुखुरा पाल्दै नपालेका भने होइनन् । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको घटना अघिसम्म उनले पनि विकासे कुखुरा पालेका थिए । 'त्योबेला घाटा लागेको थियो । अनि यातायातको हडताल भो की दाना चाहिने बेलामा नआइदिने समस्या भयो,' उनले भने, 'मैले पहिलेदेखि पनि लोकल जातमाथि प्रयोग गरिरहेकै थिए“ । भूकम्पपछि अब मसँग लोकल जातमात्रै छन् ।' डाँडानाकको भित्री गल्लीमा रहेको उनको लेखनाथ पशुपंछी ब्रिडिङ र्फममा अहिले पनि हजारवटा हाराहारी रैथाने प्रजातिका कुखुरा छन् । भालेमात्रै डेढ सय वटाको हाराहारी संख्यामा छन् । श्रीमती र छोरीले अधिकारीलाई फर्मको काममा सघाएका छन् । फरक प्रजातिका भाले लगाएर प्रयोग गरिरहेका उनले तनहुँ, स्याङ्जा र लमजुङ आदि जिल्लामा पनि १८ वटा फर्मसँग साझेदारीमा कुखुरापालन गरेका छन् । रैथाने प्रजाति पाल्न रहर गर्नेहरू चल्ला खोज्न उनको लेखनाथस्थित फर्ममा पुग्छन् । वरपर गाउँमा पालेकाहरूले अण्डा र कुखुरा बेच्न पनि उनैकहाँ ल्याउने गरेका छन् ।
'साखिनी, प्वाँख उल्टे र घाँटी खुइले गरेर तीन प्रजाति र यिनका क्रससहित अहिले मसँग आठ प्रकारका कुखुरा छन्,' उनले भने, 'हुन त सबै पशुपंछी र मान्छेमा पनि हाडनाता ख्याल राख्नुपर्छ । कुखुरामा मैले भाले लगाउँदा हाडनातामा पार्दिन, त्यसले गर्दा प्रयोग सफल छ ।' जहाँ बोइलर कुखुरा खानयोग्य तौलको डेढ महिनामै हुन्छ, त्यहीँ लोकललाई भने तयउर हुन तीनदेखि चार महिना लाग्ने उनले बताए । 'दाना संतुलित तरिकाले दिने, चिसो-तातो र रोगव्याधि ख्याल गरे लोकल प्रजाति पनि एउटै कुखुरो आठ-नौ किलो तौलको बनाउन सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'अहिले मेरोमा आएर, हेरेर, चल्ला लगेर पाल्नेहरूले पनि मनग्गे फाइदा लिन थालेका छन् ।' कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, लमजुङ, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ लगायतका ट्रेकिङ रुट र होमस्टे सञ्चालित जिल्लाका व्यवसायीसँगै गाउँलेलाई रैथाने प्रजाति पाल्न सल्लाह दिइरहेको उनले बताए । 'हिजोआज लोकल पाल्नुस् भनेर चित्तबुझ्नेगरि सल्लाह दिने नै कोही भएनन्,' उनी भन्छन्, 'गाउँघरमा जति जोगिएका छन् त्यो गाउँलेले जानीनजानी पालेर जोगिएका हुन् ।' जंगलमा हुने कुखुरालाई मानवीय सभ्यताको विकास क्रमसँगै घरपालुवा बनाइएको हो । जंगलमा हुर्केका भाले आफ्नो समुह छाडेर अर्को समुहमा जाने, त्यो समुहका भालेलाई लडाइँ गरेर अन्तै धपाएपछि प्रजननमा हाडनाता नपर्ने विकास भइआएको उनी बताउँछन् । 'हामीले गाइभैंसी पालौं, भेडाबाख्रा वा कुखुरा,' उनी भन्छन्, 'हाडनातामा प्रजनन् हुन नदिने हो भने पशुपंछी स्वस्थ हुन्छन् । छिटो रोगले भेट्दैन ।' पोल्ट्री फर्महरूले आवश्यकताअनुसार चिसो-तातो राखेजस्तै रैथाने प्रजाति पाल्दा पनि तापक्रम, आहारा र हाडनाता ध्यानमा राख्न नसक्दा गाउँघरमा पाल्नेले फाइदा लिन नसकेको अवस्था भएको उनी बताउँछन् । 'हाम्रो फरक फरक भूगोलमा घरपालुवा पशुहरू फरक फरक प्रजातिका भएजस्तै कुखुरा पनि छ,' उनी भन्छन्, 'यसो हेर्दा यो अनुसन्धानका लागि राम्रो विषय हो । तर, यसमा काम गर्नेहरू मैले भेटेको छैन । बरु जसलाई भेट्यो विकासे जात पाल्नेबारे खरर बताइदिन्छन् ।' मुलुकको जुनसुकै कुनामा स्वाद र धार्मिक संस्कार प्रयोजनका लागि रैथाने प्रजातिका कुखुराको माग सधैं हुने भएपनि धेरै पालेर व्यवसायिक काम गर्नेहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेको उनले बताए ।
ग्रामीण कुखुरा तथा रैथाने पशुपंछीपालक कृषक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी भन्छन् 'जातीय चेत बढेका बेला आआफ्नो संस्कार संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्छौं भने हाम्रा रैथाने प्रजतिका पशुपंछी जोगाउन किन अघि नसर्ने ?' पाल्दा विकासेका तुलनामा केही ढिलोगरि बेच्नयोग्य हुने भएपनि रैथाने प्रजातिका कुखुराले किसानलाई घाटा नपर्ने उनको दाबी छ ।
कास्कीको पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले कुखरामा लाग्ने रोगबारे अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ । यहाँ रोग पहिचान र निदानको उपाय खोज्न पुग्ने विकासे कुखुरापालक नै अधिकांश हुन्छन् । 'लोकल कुखुरा झोक्रायो की के रोग लाग्यो भनेर सोधीखोजी गर्नुभन्दा काटेरै खाइहाल्ने चलन छ,' डा. केदार पाण्डे भन्छन्, 'हामीकहाँ पाइने रैथाने प्रजाति वातावरणअनुसार बाँच्न सक्ने प्रकारकै छन् । तर, बेलाबखत तिनमा लाग्ने रोग के हो भनेर चासो लिने किसान मैले निकै कम भेटेको छु ।' पछिल्ला केही वर्षता राम्रो दाम आउने बुझेकाहरूमा व्यवसायिक तरिकाले लोकल कुखुरा पाल्न चासो बढ्न थालेको उनले बताए । 'बन्द खोरमा नापेर दाना खुवाएर पालेर लोकल हुने होइन,' उनले भने, 'लोकल पाल्नेले छोडेर पाल्नुपर्छ, चरनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र कुखुराले एक्सरसाइज गर्न पाएको हुनुपर्छ ।' साखिनी, प्वाँख उल्टे र घाँटी खुइले नेपालका पुराना र चलनमा रहेका कुखुराको रैथाने प्रजाति भएको उनले बताए । 'भाले पोथी हेर्दा सुन्दर, छिटो बढ्ने र मासु स्वादिलो हुने साखिनी हो,' उनले भने, 'लोकल प्रजाति अझैसम्म निर्वाहमुखी तरिकाले पाल्ने नै धेरै भएकाले न किसान संगठित छन्, न उनीहरूको निश्चित बजार छ ।' बजारमा लोकल कुखुराको माग सधैं हुने र तुलनात्मकरूपमा विकासे भन्दा राम्रो दाम पाइने बुझेकाहरूले बिस्तारै गाउँघरमा प्रजाति नै पाल्न रहर गरिरहेको उनले बताए ।
(२९ असोज २०७५ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सामाग्री संग्रहका लागि ब्लगमा साभार)
पोखरामा काम गर्न आएको वर्षदेखि नै मैले समय मिलेसम्म ताल, खोला र डाँडा घुम्न रुचाएको छु । बेगनास ताल घुमेर फिर्दा साथीहरूले २०७२ को अन्त्यतिर पहिलोपटक अधिकारीको घर रहेको फर्ममा पुर्‍याएका थिए । त्यो दिन उनीकहाँ करिब १ घण्टा बसियो होला ।
घाम नडुब्दै थुप्रै भाले पालैपालो बसे । उनी बोलिरहे, काम गरिरहे । अन्डा लिन आउनेलाई अन्डा र चल्ला लिन आउनेलाई चल्ला बेचे । कुखुरा किन्न आउने केहीले राम्रा राम्रा भाले तौलेर लगे । अधिकारीले आफू काम गरे, सहयोगीलाई अह्राए । चुनाको घेरा टेकेर मात्रै हामीलाई कुखुराको खोर भएतिर फोटो लिन बोलाए । थरि थरिका कुखुरा देखाए । केही भाले झिकेर आफ्नो पाखुरामा चटकेले जसरी राखे । रंगरूपमा केही भाले त अघिपछि कहिल्यै नदेखेकाहरू पनि रहेछन् । लाग्यो, यस्ता व्यस्त मनुवासँग कुरा गरिदिएर समय नास पारियो । हामी नपुग्दा उनले धेरै काम भ्याउने रहेछन् । यिनलाई डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्ने लागिरह्यो । तर, हामी ३/४ जना थियौं । केही साथीले उनका बारेमा पहिल्यै समाचार गरिसकेका रहेछन् । उनलाई पनि समाचारको महत्व थाहा रहेछ ।
हामीले कुरा टुंग्याएर निस्कन हतार गर्दा पनि उनले हतार मानेनन् । आफ्ना कुरा सुनाइरहे । अफिस फर्किएपछि अरू कामहरूको चाप पर्‍यो । उनका बारेमा लेख्न रहर थियो । तर, त्यो एउटा भेटमा प्राप्त जानकारी पर्याप्त थिएन त्यसैले फेरि भेट्नु आवश्यक लाग्यो । हामी 'गोलभेंडा फलाएर लाखौं, कखुरा पालेर करौडौं, तरकारी फलाएर मनग्ये' ढाँचाका समाचार दोहोर्‍याइ रहन्छौं । कहिलेकाही यस्ता समाचारबारे कृषि, अर्थ र फीचरमा ध्यान दिने अग्रजहरू सोध्नछन् - हामीले सही समाचार पस्केका छौं ? हरेक पेशाका दु:ख हुन्छन् । कृषि पेशामा सजिलै लाभ हुन्न । मनग्गे कमाउन पर्ने हैरानीका कुरा किन लेख्न छुटाउँछौं ? सफल हुनका लागि पर्ने लगनशीलता, परिश्रम र बेलाबेला पेशा ठीक चयन गरिएनछ भन्ने मान्छेका दुविधा खोइ केलाएको ?' तर, त्यस्ता अन्तरकुन्तर नकेलाएका समाचार लेख्न छाडिन्न । छापिन्छ पनि बारम्बार । तर, आफूले लेख्दा होस् वा अरूले, सुखदु:ख सबै लेखेमात्रै कुनै पनि पेसा सजिलो, असजिलो थाहा लाग्छ । तर, धेरैपटक अखबारको पेज भर्न 'फिलर न्युज' चाहिएका बेला कसले अन्तरकुन्तर समेटेको मापदण्डबारे हेक्का राखोस् । धेरैपटक छापिएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार केके पुगेन भन्ने छनफल हुन्छ ।
डा. राजेन्द्र अधिकारीको विषय कुखुरा पालेर मनग्गे कमाइवाला होइन । उनको रैथाने पाल्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश समाचारको विषय ठीक हुन्छ भन्ठानेर मैले फेरि भैट्न खोजेँ । समय के कसो भो मिल्दै मिलेन । दोस्रो भेटमा उनी निकै व्यस्त थिए । मैले उनको मूल्यवान समय नष्ट गर्न चाहिँन र, थोरै कुरा गरेर फर्किएँ । त्यसले पनि मैले लेख्न चाहेको जस्तो जानकारी यथेष्ट भएन ।
तेस्रो भेटका लागि समय मागेँ । उनले '१ घण्टा फुर्सद हुन्छ, आउनुस् । म काम गर्दै कुरा पनि गर्दै गर्छु' भनेपछि गइयो । करिब ३ घण्टा बसिएछ । धेरै कुरा भयो । आएर चार भागको दुइमात्रै लेखियो । अधिकारीको मन परेको पक्ष रैथानेले पनि फाइदा दिन्छ, पाल्ने तरिका पुर्‍याउँ भन्ने भनाइमात्रै उत्तम हो । समाचारको मर्म पनि त्यतिमात्रै हो ।
उनले स्वास्थ्य विषय पढेको, कहाँ पढे, कसरी सर्टिफिकेट ल्याए । त्यो पढाइको पेशा किन गरेनन् भन्ने कुरा माथिको समाचारका लागि आवश्यक थिएन । त्यसैले लेखिएन । कुखुरा पाल्न थालेर थुप्रै हैरानी खेपेछन्, फाइदा पनि गरेछन् । तर, उनको फर्म हेर्दा उल्का फाइदा गरेको भान मिल्दैन । तीन वर्ष अघि जाँदा जस्ता संरचना थिए, पछि पनि त्यसमा खासै फरक थिएन । तर, तरिका पुर्‍याएर पालेका उनको तरिका लोकल जात व्यवस्थित तरिकाले पाल्छु भन्नेका लागि हेर्न योग्य छ ।
समाचार लेख्नुअघि उनले गरिरहेका कामका विषयमा कृषिका सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेँ । उनीहरूले राम्रो कुरा गरेनन् । त्यो लेखिएन । जंगली कुखुरा घरमा पाल्न पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीले 'राजेन्द्रजीले गर्न नहुने काम गर्नु भएको छ, जंगली जात ल्याएर त्यससँग क्रस ब्रिडिङ गर्नुभएको छ' भने । उनले राम्रो गरेको भन्नै चाहेनन् । अधिकारीले पनि सुरूमै भनेका थिए- 'म जे गर्न चाहन्छु त्यस्ता योजनाला लागि कृषि मन्त्रालय र सरकारले मेरो पनि सल्लाह लिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, कर्मचारीको पारा अलि बेग्लै छ ।' त्यो 'बेग्लै' शायद कुनै समय खटपट परेको हुनुपर्छ भन्ने ठानियो । व्यक्तिगत कुरा जेसुके होस्, पहाडी गाउँहरूमा छाडा छाडेर पालिने कुखुरामा जंगली भाले लाग्छ । यो स्वभाविक र सहज छ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छेउछाउ सयौं भैंसीगोठ छन् । जसमा लाग्ने राँगो जंगली भैंसी(अर्ना) हुन्छ । जमानादेखि आरक्षसँगै भैंसीगोठ राखेकाहरूले अर्नालाई मेरो भैंसी भनेर दाबी गर्ने नगरेका पनि होइनन् । जे भए पनि जंगलीसँगको क्रस ब्रिड रैथाने घरपालुवाका तुलनामा लाभदायक मानिन्छन् । जे होस्, राजेन्द्र अधिकारीले ल्याएका केही भाले त्यस्ता क्रसका उपज छन् । उनले नै पनि मलाई प्रष्ट भने । केही भाले लामा लामा नङ्ग्रा भएका, बुढा छन् । जसलाई उनी यति उती लाख दिन आएका थिए, बेचिँन भन्न छुटाउँदैनन् । तर, छन् गाउँघरमा सजिलै देख्न नपाइने गतिला बिउ भाले ।
समाचार लेखियो । छापियो । चाडबाड सुरू भएपछि पत्रिकाका भित्री पृष्ठमा प्रकाशित समाचारको चर्चा गर्न कसैलाई ध्यान हुन्न । यो समाचार पनि त्यस्तै भयो । आफूलाई कुनैबेला हेर्न-पढ्न काम लाग्छ भनेर आज ब्लगमा संग्रह गरियो ।
समाचार प्रकाशित भएपछि उनको र मेरो प्रत्यक्ष भेट भएको छैन । फोनमा कुरा भयो । हुन्छ । उनले अझै धेरै कुरा लेख्नुपर्छ भन्थे । मैले 'हस हुन्छ' मा टार्छु । उनी चाहन्छन्- जंगली प्रजाति पनि गाउँलेले घरमा पाल्न पाउनुपर्छ । कारण- तिनलाई घरपालुवा जसरी छिटो रोगव्याधिले भेटदैन । यसका लागि इजाजत पाइने/नपाइने लफडा छँदैछन् । नियमकानुनले मार्न, सिकार गर्न वर्जित भनेपनि जंगल जंगल चारो छरेर, पासो थापेर, गुलेली र गोली हानेर कुखुराका जंगली प्रजाति सिकारको चलन नयाँ छैन । त्यसमा पनि जंगल छेउछाउ घर भएकाहरूलाई थाहा हुन्छ, कालिजको हालत के छ । जे होस्, पछि नयाँ केही भए अप्डेट गरम्ला भनुम् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 2:00 PM No comments:
गत महिना राजधानीमा एउटा कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरेँ । कुरा किताबको थियो । अरू विधा भए के कसो हो तर, किताब पनि 'लाटोकोसेरो' को । त्यो भेलाका लागि म २४ घण्टा राजधानीमा थिएँ । शुक्रवार बेलुकी ९ बजे चढेको बसले मित्र राजु आचार्य र मलाइ कलंकीमा बिहान कसरी ४ बजे उतारेको थियो ।
कार्यक्रम 'लाटोकोसेरो की बाठोकोसेरो' किताब विमोचनको थियो । डा. हेमसागर बराल र गुरु करणबहादुर शाहले किताब बिमोचन गर्नुभयो । कार्यक्रमपछिको चियापान बसाइँमा प्राध्यापक शाहले मलाइ २/३ पल्ट नै 'भाइले लेख्न छाड्नु हुँदैन । लेख्नुस् । लेखीरहनुस्' भनिरहनु भयो । यस्ता उर्जा दिने प्रेरक मनुवासँगका बसाइँ आनन्दका हुन्छन् । लेख्न नछाडौं भइरहन्छ । तर, सजिलो छ र चराका कुरा लेख्न !
हामी अखबारी मजदुरलाई बिकाउ कुरा जहिल्यै 'राजनीति' रहिआएको छ । तै फरक विषयहरूमा लेख्दालेख्दै पनि चराका कुरा सजिलै सूचना पाइनेमा पर्दैन । वन, वातावरण, जैविक विविधता र चराका कुरा अखबारका नियमित पाठकका लागि नयाँ खुराकी हो । दिनु पर्छ । तर, सही सूचना जुटाउन समय लाग्छ । पोखरा बसाइँमा जैविक विविधतामा रूचि भएका र यही विषय पढ्ने-पढाउनेका जमातले पनि हौस्याउँछ । तर, म हिजोआज विषय हराएजस्तो भएको छु ।
चराका कुरा लेख्न फोटो राम्रो हुनुपर्छ । फोटा खिचेपछि जे खिचियो, त्यसका बारे बुझेकालाई भेटेर-सोधेर जानकारी जुटाउनुपर्छ । मसँग केही विषय छन् तर, 'अन्डर कन्स्ट्रक्सन ।' पत्रकारिता यस्तो पेशा हो जहाँ आफूले कलेजमा जुन विषय पढियो, त्यही विषयले पनि काम गर्न सघाउँछ । तर, धेरथोर लेख्नु सबैथोकका बारेमा पर्छ । राजधानी बाहिर रहेर सञ्चारमाध्यममा काम गर्नेले 'म यो जान्दिन' भन्न पाउँदैन । अत: विषय चयन गरेर म केही चिजबिज तयार त पार्दैछु । तर, भन्न सक्दिन पुरापुर पढ्न हुने कहिले बनाउन सक्छु ।
भूगोलअनुसार पाइने चराका प्रजाति फरक छन् । तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र यो मामिलामा धेरैथोक खोज्न र खिच्न-लेख्न सकिनेमा पर्छ । विषय भेटिन्छन् । तिनका पछि लाग्ने समय पर्याप्त छैन । तैपनि रूचिले डोर्‍याएको मान्छे क्यामेरालाई साथी बनाएर हिडेकै छ ।
चराका कुरा थुप्रै छन् । कहाँ केके पाइन्छन्, तिनको जीवनचक्रदेखि अहिलेका अवस्थासम्म विषयलाई रोचक बनाउनु आफ्नै रुचि र खोजीमा निर्भर छ । पहाडी बस्तीमा जाँदा दिनदिनै बन्दै गरेका पक्की घर, होटल, रिसोर्ट देख्दा अब गौ‌‌थलीले गुँड कहाँ लगाउँदा हुन् । यही विषय हुन सक्छ । हामीले आफ्ना बास बनाउँदा आफ्ना लागि बनाएका छौं । मान्छेकै आडमा बास लिने पंछीका प्रजाति थुप्रै छन् । कोही घरमै आएर बस्छन्, कोही बस्ती वरपर बस्न रुचाउँछन् ।
घडेरी बनाउने, जग्गा सम्याउने गरेको देख्न पाउनु सहज छ । रुखपात मासिएका छन् । घर फलेको फलेकै छन् । मान्छेले आफ्नो बास बढाएको बढाएकै छ । हामीले देख्दै आएका धाद्रा, धाप, वर्षैभरि चिस्यान रहने क्षेत्र पुरिएर तिनमा पनि घर फलेका छन् । ती क्षेत्रका जीवजन्तु बाटो लागे हुनन् ।
घरआँगनमा भँगेरा आउँछन् भने ती कहाँ बस्छन्, कसरी बस्छन्, के खान्छन् । आफैंमा यो विषय छ । सफासुग्घर चाहने मनुवा पंछीका बिष्टा सफा झेल्न रुचिकर मान्दैन । त्यसैले गुँड लगाएर फोहोर झार्ने प्राणीले उकहाँ आश्रय लिन खोजे धपाउँछ ।
विषय छरपस्ट छन् । तिनलाई पठनीय बनाउनु लेख्ने स्वयंको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने लाग्छ । चराका बारेमा लेख्दै गर्दा 'मलाइ चरा मन पर्दैन' भन्ने मान्छे मैले भेटेको छैन । बरू माइण्ड नगर्नुस् है भनेर 'त्यसको फ्राइ कति मिठो हुन्थ्यो होला' भन्नेलाई बराबर भेटिन्छ ।
चराहरू आकारमा जति साना हुन्छन्, तिनीहरूको गुँड उति नै मिहिनेत गरेर बनाएको देख्न पाइन्छ । जस्तो की फिस्टा, कालेबुंगे, तोप चरा । ठूला आकारका चराका गुँड नियालेर हेर्दा तिनलाई बनाइदिनु पर्छ की के हो जस्तो हुन्छन् । जस्तो की काग, ढुकुर, बकुल्ला, गरुड, चील, गिद्ध आदिका गुँड । झिक्रामिक्रा बटुलेर बनाइएका गुँडमध्ये हामीले सजिलै देख्न सक्ने भनेको बकुल्ला र ढुकुरका गुँड हुन् । आकाशमा निकै माथिसम्म उडान भर्नेहरू गुँड लगाउन पनि अग्ला ठाउँ रोज्छन् । जहाँ मान्छे सजिलै पुग्दैनन् ।
भूइँ-भूइँ र झाडी-बुट्यानमा सजिलै देख्न सकिने पंछीका गुँड हाम्रै वरपर हुन्छन् ।
प्रकृतिले आआफ्नै प्रकारले गरिदिएको जीवनचक्रमा पंछी स्वार्थ राख्दैनन् । बरू हामी आस राख्छौं । तर, हामी न तिनको बास राख्छौं न त तिनलाई आफ्ना कारणले पर्ने बाधामा गम्भिरता ।
पहिले पहिले केके धेरै देखिन्थे/देखिँदैनथे, अनि अहिलेको अवस्था के हो बाट पनि विषय सुरु हुन सक्छ । बालीविरूवामा चलाउने विषादिले पनि तिनलाई असर पारेकै छ । चितवनका केही रिसोर्टमा देख्न पाइने रमाइलो दृष्य के हो भने पाकेका फलफूल बोटैमा छाडिदिनु । यस्तो गरे चरा आउँछन् । तिनीहरूले सजिलै आहारा पाउँछन् । हामी सजिलै फोटो खिच्न सक्छौं ।
केही चराचुरूंगीलाई हाम्रो बाली चक्रको प्रभाव परेको छ । वर्षभरि लगाइने बालीमा केके हटे, केके थपिए । त्यसबाट पनि विषय भेट्न सकिन्छ । चराले मन पराउने बाली घटे की घटेनन् ! पोखरामा फेवातालको पश्चिमी क्षेत्र पामेमा 'कुर्मा' आएर बस्न थालेको करीब एक दसक भएछ । दुइ वर्षअघि मैले सजिलै तिनका हुल देख्न पाएको हो । तर, हिजोआज त्यहाँ खेती गर्नेभन्दा रेस्टुरा र रिसोर्ट फलाउने धेरै भए । कुर्माले धान खाइदिन्छ । किसानले मन पराउँदैनन् । पहिले पहिले त्यो क्षेत्रमा कुर्मा मारेका घटना अहिले पनि सुन्न पाइन्छ ।
पोखरामै मैले हिड्दा-डुल्दा देखेको विषयमा भँगेरा र डाङ्ग्रे (सारौं/रुप्पी) पनि छन् । भँगेराका दुइ प्रजाति रूख भँगेरा र घर भँगेरा एउटै हुलमा देखिन्छन् । अनि जंगल मैना भनिने वनरूपी र कमन मैना भनि डाङ्ग्रे पनि सँगै घुमेका देखिन्छन् ।
पोखरामा रहेर तालका कुरा गर्दा अतिक्रमणको ब्यथा चर्को छ । मान्छेहरू तालको पानी मुनिको जमिनका लालपुर्जा हातमा लिएर बसेका छन् । फेवातालमा पानी उम्रँदैन । पश्चिममा अँधेरी, हर्पन र नगर क्षेत्रभित्र बुलौंदी र फिर्के खोला मुल स्रोत हुन् । हिउँदमा पानी थोरै रहने भएपनि चारैवटा खोलाले फेवातालको पानीलाई भरथेग गरेका छन् । नगरको घना बस्तीभित्र भएर बग्ने फिर्के र बुलौंदी नालामा परिणत भइसकेका छन् । यी दुइ खोलाले तालमा ढलसहितको फोहर पुर्‍याउँछन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ देखि फिर्केलाई संरक्षण गर्ने भन्दै योजना अघि सारेेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन जटिल छ । कारण- खोलाको मापदण्ड मिचेर डीलै-डील बस्ती बसेको छ । अग्ला अग्ला घरहरूको साँधमा फिर्के धेरै ठाउँ सहजै देखिँदैन । ती घरहरू भत्काएर फिर्केलाई पुरानै अवस्थामा सुरक्षित पार्ने योजना प्रभावकारी रूपमा बढाउन स्थानीय सरकारलाई धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । पोखरा महानगर बन्दा गाभिएको लेखनाथ क्षेत्रमा पनि बेगनासहितका आठवटा ताल छन् । जहाँ जहाँ जलाशय, खोलानाला र जंगल छन्, त्यहाँ चरा छन् । तुलनात्मक रूपमा पुरानो पोखराभन्दा नयाँ पोखरा भन्न मिल्ने लेखनाथ क्षेत्रमा धेरै चरा छन् ।
लेखनाथ क्षेत्र धेरै पोखरेलीको खेती गर्ने कामत थियो । कालान्तरमा यहाँ पनि अव्यवस्थित बसोबास तीव्र भइसकेको छ । जहाँ खेती हुन्छ, त्यहाँ कीरा-फट्यांग्रा र मुसा हुन्छन् । तिनलाई आहारा बनाउने चराका थुप्रै प्रजाति पनि हुन्छन् । पोखराको पछिल्लो अभ्यास परम्परागत तवरको खेतीभन्दा अन्य व्यवसाय छ । बोरामा चामल-दाल आइपुग्छ, तेल आउँछ । दूधको माग डेरीले पुरा गरिरहेकै छन् । त्यसैले खेतीका तुलनामा जमिन टुक्रयाएर घडेरीमा बेच्दा राम्रो घर, गाडी र विलासी आवश्यकताको सहज पूर्ति भइरहेको सहरले देखेको छ । खेतमा काम गर्न मजदुर, बिउ-मल र भित्र्याउन पर्ने लागत, समय र श्रमको हिसाब निकाल्दा जग्गा दलाल घडेरी किनबेचमा उत्साहित छन् ।
यसले परम्परागत कृषि प्रणालीमा असर पारेको छ । जसको असर वातावरणमा परेको छ । चराचुरुंगी र अन्य जीवमा परेको छ । यस्तो अवस्था एक्लो पोखरा उपत्यकाको मात्रै होइन । पटक पटक व्यवस्था फेरिएपनि कुनै पनि सरकारले बसोबास, उद्योग र खेती गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेन । जसले गर्दा मनलाग्दी जतासुकै छ ।
को ठूलो, कसका आवश्यकता महान
केही वर्षअघि मैले 'चमेरो बिचरो' लेख्दा सुरुवातमा एउटा व्यवसायीको प्रसंग उल्लेख गरेको थिएँ । विराटनगरका ती व्यवसायीले जहाँ आफ्नो व्यवसायिक प्रतिष्ठानका लागि भवन बनाएका थिए, त्यहाँ कुनै जमानामा वरको ठूलो रूख थियो । चार मान्छे उभिएर अंगालो हाल्दा पनि नसकिने गोलाइ थियो त्यो बरको रूखको । काटियो, घर उभियो ।
बर छउञ्जेल त्यहाँ झुण्ड झुण्ड चमेरा बस्थे । दिउँसो त्यो बरको रूख भएको बाटो हिड्दा अनौठो लाग्थ्यो । बासस्थान विनास भो, झुण्ड तितरबितर भयो । ती व्यापारीले भनेका थिए-बजारभित्र महंगो मूल्यको जग्गा चमेरा बस्छन् भनेर कसरी छाड्ने ? हामीले गरिखानु परेन ?' उनको तर्क नाजायज लागेको होइन । तर, हामी जहाँ जहाँ पुगौं, खेती हुने वा बाँझो जमिनका कुरा छाडौं । डाँडा, खोला धाप, पैनी, वन बुट्यान जे भएनि ती निजीकरण भए/भइरहेका छन् ।
मान्छेलाई घर चाहिएको छ । घर भएर पुगेन थुप्रै सम्पती चाहिएको छ । आफ्ना लागि मात्रै चाहिएको छ । मान्छेकै इच्छा सर्वोपरि भइरहँदा प्रकृतिमा रहेका अरू जीवको वासस्थान विनास गम्भिरताको विषय मानिन्न । उनीहरू कहाँ जालान् ?
पर्यटकीय नगरी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ । अँ पोखराको कुरा गर्दा यहाँ कसैले पनि त्यो विमानस्थलका विरूद्ध बोल्नुहुँदैन भन्ने जमातको जगजगी छ । जसले बोल्छ, त्यो पोखराको विकासको शत्रुमा दरिन्छ । विमानस्थल चाहिन्छ भनेर जग्गा छुट्याएको पाँच दसकपछि पनि योजना सरकारले सजिलै अगाडि बढाएको होइन । धेरै दिन आन्दोलन र धर्ना भए । विकासप्रेमी भनिएका अगुवाहरू यतिबेला 'हामीले गर्दा' भनेर भन्न छुटाउँदैनन् । अबको चार वर्षपछि विमानस्थल तयार भइसक्ला, विदेश आउजाउ गर्ने जहाज चढ्न पोखरेलीले काठमाडौंको जमिन टेक्न नपर्ला । योजनाकारका सुकिला कुरा रमाइला छन् । विमानस्थलले पोखराको विकासमा क्रान्ति ल्याएको छ । होटल-रेस्टुरेन्ट र अरू व्यवसायमा भविष्य देखाएको छ । पोखरामा लगानी आएको छ ।
यी गन्थनको अर्को एउटा पाटो चासोको छ, जो निकै कमले कुरा गर्छन् । विमानस्थलका लागि भनिएको जमिन वर्षौदेखि खाली थियो । त्यो वस्तुभाउको चरन क्षेत्रमात्रै थिएन, पोखरामा बिभिन्न प्रजातिका गिद्ध सजिलै हेर्न पाइने ठाउँ थियो । घाँसे मैदानमा पाइने चराका थुप्रै प्रजाति त्यहाँ जाँदा सजिलै हेर्न सकिन्थ्यो । यतिबेला निर्माण धमाधम छ । त्यो क्षेत्रमा चौपाया हुल्न पाइँदैन । चराचुरुंगीले विकल्प खोजी सके हुनन् ।
दक्षिण एशियामा नौ प्रजाति गिद्ध पाइन्छन् । पोखरा उपत्यकामा मात्रै आठ प्रजाति हेर्न सकिन्थ्यो । जहाँ हाम्रो कृषि प्रणाली फेरिएर खेती गर्ने क्षेत्र घट्यो, त्यहीँ खेती भइरहेका ठाउँमा पनि किटनासकको उपयोग बढेको छ । ट्याक्टर र मिनीटिलरले जोते पुग्ने भएपछि गोरू पाल्ने झन्झट पनि रहेन । खेतमा पहिले पहिले जसरी मुसा लाग्दैनन् । जहाँ लाग्छन्, त्यो क्षेत्रमा पनि निकै कम भइसकेको छ ।
मुसा लाटोकोसेरो र चीलका बिभिन्न प्रजातिको मुख्य आहारा हो । गिद्धले सिकार गर्दैन । मरेर फालिएका सिनो खान्छ । चौपाया पाल्न घट्यो । जहाँ जहाँ पालिन्छन्, त्यहाँ मरेका जन्तु बाहिर त्यसै फालिँदैनन् । पुरिन्छ, गाडिन्छ । सन् २०१५ सम्म गरपालुवा पशुलाई दर्द निवारकका रूपमा प्रयोगमा रहेको 'डाइक्लोफेनेक' को विषाक्त असरले थुप्रै गिद्ध मासिए । पछि त्यसको प्रयोगमा सरकारले बन्देज गरेपनि गिद्धका लागि हितकर वातावरणीय चक्र नै फेरिएको छ । गुँड लगाउन अग्ला रूख त मासिए नै, आहारा पनि नपाउने भएपछि गिद्ध अबका वर्ष झन दुर्लभ हुँदै जाने अवस्था छ ।
पछि लेख्छु ....................आजलाई यति
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 3:14 PM No comments:
content catagory तस्बिरभन्दा पछाडि, दैनिकी